Chitatu, Kukadzi 10, 2016 Local time: 02:23
HARARE— Mvura yakawanda yanaya zvukuru muHarare muzuva rekisimusi, izvo zvaita kuti vamwe vanhu vange vakaronga mhemberero dzavo dzekimisimusi vatadze kuenderera mberi nehurongwa hwavo.
Mvura yatanga kunanya munzvimbo dzakawanda mangwanani zvekuti masikati mvura iyi yange yatekeshera neguta rese zvekuti vange vakaronga kuenda kunzvimbo dzekutandarira vatadza kuita izvi.
Mumwe wevanhu ava ndaVaEvans Katiyo, avo vange vakaronga kuenda nemhuri yavo kwaMereki mumusha we Warren Park D uko kunoitwa zvekugocha gocha vanhu vachidya nekunwira nwira.
VaRas Zhanje, avo vanogara kuCrowbrough, vanoti zvinhu zvange zvisina kuvamirira zvakanaka uye vange vari kutsvaga mari yekuti vazotanga kufara manheru eChipiri.
Mumwe mudzimai anogara mumusha weHighfields, Amai Edinah Banda, vanoti mhuri yavo yaenda zvayo kusvondo kundocherechedza zuva rekuzvarwa kwaJesu asi haina mari yekuita mabiko.
Asi mune dzimwewo nzvimbo vanhu vange vari kuenderera mberi nemafaro zvisinei kuti kwange kuchinaya here kana kuti kwete.
Asi ongororo yaitwa neStudio7 yaratidza kuti nzvimbo zhinji dzekutandarira dzange dziine vanhu vashoma sezvo vamwe vanhu vakaenda kuzororo rekisimusi.
Zvichakadai, mukati meguta mange muine runyararo sezvo zvitoro zvizhinji zvange zvakavharwa. Magetsi amboendawo mukati meguta uye atozodzoka masikati. Kune mimwe misha, vanhu vatamba kisimusi vasina mvura.